Iqonga lemidlalo eYiputa | Ukuhamba kwe-Absolut
daniel | | Yiputa
Xa sicinga nge-Egypt iingqondo zethu zigcwaliswa kwangoko yeyona mifanekiso iqhelekileyo yelizwe, kunye nomfanekiso obalaseleyo we Iiphiramidi imvelaphi. Nangona kunjalo, inkcubeko kweli lizwe lakudala nelinomdla inezinye iindlela ezininzi. Enye yazo yi yeqonga eiphutha.
Imidlalo yeqonga yamandulo yeza eYiputa ivela kumaGrike ngexesha le ixesha lokuphila (phakathi kwenkulungwane yesi-XNUMX neye-XNUMX BC). Kwilizwe lomNayile lo mboniso wobugcisa wawunxulunyaniswa namasiko athile kunye neminyhadala enje Ihlelo lika-osiris, ngemidlalo kunye nemiboniso eqhubeke iintsuku ezininzi.
Nangona kunjalo, isiko lemidlalo yeqonga emazweni ase-Egypt lanyamalala ngexesha lama-Middle Ages kwaye alizange lizalwe ngokutsha kwaphakathi kwinkulungwane ye-XNUMX. Okokuqala enkosi kwimpembelelo yaseFrance kwaye kamva kuleyo yaseBritane.
1 Ukuzalwa kweqonga langoku e-Egypt
2 Iithiyetha eziphambili e-Egypt
3 Umnyhadala wovavanyo weCairo
Ukuzalwa kweqonga langoku e-Egypt
Imidlalo yeqonga yemvelaphi yaseYurophu inefuthe ukuzalwa kunye nokuvela kwemidlalo yeqonga yanamhlanje yama-Arab eyaqala ukukhula eYiputa ngelo xesha. Ngaloo minyaka ababhali bokuqala abadumileyo base-Egypt bavela njenge UAhmed Shawqi, eyayilungisa ii-comedies ezindala ezivela kwilizwe. Olu hlengahlengiso lwalungenamabango makhulu kunokonwabisa uluntu lwaseArabhu, ngaphandle kokuba abasemagunyeni base-Bhritane baphathe ingqwalaselo encinci kubo.
UTawfik al-Hakim, "utata" weqonga langoku lase-Egypt
Nangona kunjalo, ithathwa njenge UTawfiq al-Hakim (1898-1987) ngenene unguyise weqonga lamandulo lase-Egypt, kwiminyaka elishumi yama-20s yenkulungwane edlulileyo. Ngelo xesha, umbhali uvelise malunga namashumi amahlanu emidlalo yeentlobo ezahlukeneyo. Namhlanje umsebenzi wakhe uthathwa njengophelelwe lixesha, kodwa usaziwa njengeyona nto iphambili kwimidlalo yeqonga eYiphutha.
Elinye inani elibalulekileyo lemidlalo yeqonga kwilizwe leNayile Yusuf idris (Ngo-1927-1991), umbhali kunye nomdlali odlalayo onobomi obunamandla obugcwele zihambo kunye neengxabano zobuqu ezivela kwinzame zakhe zopolitiko. Wangena entolongweni amatyeli aliqela kwaye eminye yemisebenzi yakhe yavalwa nguzwilakhe uNasser. Waye wanyanzelwa ukuba ashiye ilizwe ixesha elifutshane, ebaleka ingcinezelo.
Kwezobugcisa, wakwazi ukuyiphucula indawo yeqonga laseArabhu kwimixholo yemisebenzi yakhe nakulwimi olusetyenzisiweyo kuzo. Umntu wakhe uhlala ethelekiswa nombhali odumileyo waseCairo UNaghib Mahfuz. Njengaye, u-Idris wonyulwa kwi-Nobel Prize, nangona kwimeko yakhe engakhange afumane ibhaso ekudala elindelwe, ukuhlala emasangweni.
Phakathi kwababhali banamhlanje kuyimfuneko ukuqaqambisa umfazi: Ukhuseleko lweSafaa, umbhali womsebenzi odumileyo Ordalie / Terreur. Ukongeza kwigalelo lakhe kwihlabathi lezemidlalo, uFathy ubonakale njengomlobi kunye nomenzi wefilimu, ngaxeshanye epapashe imibhalo emininzi yefilosofi. Njengabanye abafundi abaninzi base-Egypt, wanyanzelwa ukuba alishiye ilizwe. Uhlala eFrance ngoku apho athe wagxeka esidlangalaleni amaxesha amaninzi imeko yabasetyhini kwilizwe lamaSilamsi.
Iithiyetha eziphambili e-Egypt
Kumashumi eminyaka indawo eyayingoyena kubhekiswa kuyo kwindawo yemidlalo yeqonga eYiphutha yayiyi I-Opera yeKhedivial, kwi CairoYeyona ndawo indala yemidlalo yeqonga e-Afrika, eyakhiwa ngo-1869. Kwiminyaka kamva, ngo-1921 I-Alexandria Opera House (ngoku ebizwa Sayyid iDarwish Theatre), buthozame ngakumbi kubukhulu.
Indlu entle yeCairo Opera
Ngelishwa, isakhiwo esihle seKhedivial Opera satshatyalaliswa ngomlilo ngo-1971.
Ikomkhulu lase-Egypt lalingenaqonga de kwaba li-1988, xa ICairo Opera. Esi sakhiwo sinomtsalane siseGezira Island, kumNayile, ngaphakathi kweZamalek. Ikwayinxalenye yesakhiwo esikhudlwana, iZiko leSizwe leNkcubeko laseCairo kwaye linemidlalo yeqonga emithandathu, enye yazo ivulekile kwaye inesithuba sababukeli abayi-1.200.
Umnyhadala wovavanyo weCairo
ICairo Opera House ibamba unyaka nonyaka Uvavanyo loMthendeleko weTheatre, Esinye seziganeko zenkcubeko ezibaluleke kakhulu kweli lizwe nakuwo wonke uMbindi Mpuma.
Iposta yoshicilelo lowama-2018 lomnyhadala weCairo wovavanyo weTheatre
Lo mnyhadala ubhiyozelwa ngenyanga kaSeptemba kwaye uqhubeka iintsuku ezili-10. Kuyo, ababhali abadlalayo besizwe nabangaphandle kunye neenkampani zemidlalo yeqonga zinikezelwa. Zonke zenza ipowusta eyahlukileyo nenemibala ngemidlalo eyahlukeneyo yemihla ngemihla kwiindawo ezahlukeneyo zemidlalo yeqonga.
Abadlali, amagcisa okuzenzela, iimvumi, abaphathi besinxibo, abalawuli kunye nabadlali bemidlalo yeqonga abanikezelwa kumnyhadala we-Cairo Experimental Theatre banikwa umfanekiso oqingqiweyo onomdla ovelisa umfanekiso Thot ukuba ngexesha le-Ancient Egypt lalithathwa, phakathi kwezinye izinto, njengothixo wezobugcisa. Umfanekiso ophethe isithuba uhambelana nokuvalwa kwegala kulo mnyhadala kuhlobo lwayo lwe-2018.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iqonga lemidlalo eYiputa
Yiba se-Egypt ukusuka nge-15 kaSeptemba ukuya kwi-28 ndifuna ukwazi ngemidlalo ezayo, iinkampani zemidlalo yeqonga, iindibano zocweyo zobugcisa, oonopopi, iimaski ... enkosi